Black bhainda Clips
Colored bhainda Clips
Heat Kutamisirwa bhainda Clips
Printed bhainda Clips
Uchigara Color bhainda Clips
Creative bhainda Clips
Emoji bhainda Clips
Soft Grip bhainda Clips
Mbizi Paper Clips
Inodonha Plastic Paper Clips
Desktop Storage & murongi
Vazhure & Tacks
Wooden Flat Vatongi
Aluminum Flat Vatongi
Steel Flat Vatongi
Folding Crate yekutengera
Zita Badge Set
Q: Uri vanotengesa kambani kana mugadziri?
A: Tiri fekitari.
Q: Chii zvandinoda kupa mazwi?
A: Tapota dzinotipa arayire uwandu, chikumbiro, mifananidzo anonyatsoronga nokurondedzerwa, ivhu kana vanodhirowa (pamwe zvinhu, divi, kushivirirana, pamusoro kurapwa nezvimwe zvekushandisa chinodiwa etc.) ,. Zvadaro isu muchataura yakanaka mutengo mukati 2 mazuva kana kwakanga hatisi zvinhu zvakawanda.
Q: Chii MOQ wako?
A: MOQ tinofanira yeGmail.END_STRONG zvinodiwa, unyanzvi chigadzirwa uye mutengo unokwanisa kugamuchira, kunze, tinobvuma kutongwa pamberi dzokuchengeta. Ingobvunza rokutengesa edu mumwe chaizvo chigadzirwa uye tichaita kuti muzive mukuru MOQ chinhu chacho, kana unogona ngatirambei kuziva kwenyu kuitira uwandu, tichaita kuti muzive mabatiro uye ayo hama mutengo pamwero.
Q: How kuzosimbisa unhu nesu vasati kutanga zvibereko?
A: 1) Tinogona kupa ivhu uye unogona kusarudza imwe kana kupfuura, uye zvino isu kuti unhu maererano.
2) Titumirei ivhu renyu, uye tichaita maererano unhu hwako.
3) Tapota titumirei unhu zvinodiwa zvenyu detailed kana rokuongorora mitemo vasati vakawanda kugadzirwa.
Q: How kugadzirisa unhu matambudziko pashure rokutengesa?
A: Mushure mukagamuchira nhumbi, kana paine unhu dambudziko naro mukati yedu yakamboita zvinovimbisa nguva, tora mapikicha matambudziko kana zvinopa inoshanda uchapupu uye kutumira kwatiri, pashure isu asimbise matambudziko, mumazuva matatu, tichaita kugadzira kugutsikana mhinduro nokuti iwe kana isu achakumutsirai vanokwanisa zvinhu ASAP kuti muripo.
Q: rudzii muripo mashoko Unoita kugamuchira?
A .: T / T, L / C etc.
Q: Zvinoita here kuziva sei chigadzirwa yangu zvichiitika pasina kushanyira boka rako?
A: We ichapa kwokukurukurwa zvigadzirwa yaunoti uye kutumira mishumo vhiki pamwe digitaalinen mifananidzo uye mavhidhiyo izvo zvinoratidza machine mberi.
Q: Kana mukaita chenhando nhumbi, achakupa dzosera mari yedu?
A: Tinoita zvigadzirwa maererano vanodhirowa, unhu mitemo kana ivhu zvikuru kusvikira navo kusvika yenyu 100% kugutsikana. Uye chaizvoizvo isu hatingazvirumbidzi kutora mukana kuita chenhando zvigadzirwa. Tinodada kuramba mweya unhu hwakanaka. Kana chipi kurasikirwa nokuda chenhando kwenhumbi zvedu, isu tichava mutoro.
Q: How refu yenyu nguva pakusununguka?
A: Mazuva 5-10 kana nhumbi dziri unganidza. kana mazuva 30-45 kana nhumbi havasi kudanda, maererano uwandu uye zvigadzirwa.
Q: Kana tisina kudhirowa, ungaita kuti achicherera ini?
A: Hongu, isu kuti yokukweva mharidzo yako kutevedzera mharidzo.
Q: Ndingaita sei kuwana wakasununguka mharidzo kuzosimbisa unhu?
Kugara chiratidzazvizhinji mhando (uye mutengo zvishoma pane $ 10) unogona usununguke ivhu, chete muripo nokuda mitoro.
Kana zvachose mimwe mutengo kunopfuura $ 10 US madhora, mharidzo muripo hunozodiwa.
Dondipawo kugadzirwa wako, asi iwe unofanira kubhadhara mharidzo kubhadhara uye mitoro.
Uye tichadzoka shure mharidzo mari yechikoro apo tinobudisa nhumbi.
Q: Uri kuita tsika Kunyora uye kavha kuti Specification yedu?
A: Logo kudhinda uye customized kavha ruripo
Q: Ungakwanisa kuita OEM chigadzirwa?
Chokwadi, tinogona kuita OEM uye ODM
Asian Stationery Show 2019, October nderechi 27 -...
2019 kong Mega Show Part 1, October ...
No. 126 Canton Fair Time October yechi31-Nov ...
© Copyright - 2010-2019: All Rights Reserved. Tips , Hot Products , Sitemap , AMP Mobile
Factory Office bhainda Clips , Vendor Office bhainda Clips , Office bhainda Clips Producer , Mutengesi Office bhainda Clips , Office bhainda Clips Manufacturer , inobereka Office bhainda Clips ,